Ithegi: Twilio | Martech Zone
Uliqalisa njani ngokukhawuleza iphulo elisekwe kwimozulu ngaphandle kwezakhono zokufaka iikhowudi
NgoLwesine, uJanuwari 21, 2021 NgoLwesine, uJanuwari 21, 2021 Katarzyna Banasik
Emva kwentengiso yangoLwesihlanu oMnyama, uthengeko lweKrisimesi lokuthenga, kunye nokuthengisa emva kweKrisimesi sizifumana sikwixesha lokuthengisa elidikayo lonyaka kwakhona - kuyabanda, kungwevu, kuyana, kwaye kuyakhithika. Abantu bahleli emakhaya, endaweni yokuhambahamba kwiivenkile ezinkulu. Uphononongo olwenziwe ngo-2010 ngusosayensi wezoqoqosho, uKyle B. Murray, luveze ukuba ukukhanya elangeni kunokonyusa ukusetyenziswa kunye nethuba lokuchitha. Kwangokunjalo, xa kusibekele kwaye kubanda, amathuba ethu okuchitha ayancipha. Ngapha koko, kwi
I-Chili Piper sisisombululo sokucwangcisa esizenzekelayo esikuvumela ukuba ufaneleke kwangoko, indlela, kunye neentlanganiso zencwadi yokuthengisa kunye ne-inbound ekhokelela kumzuzu abaguqula kwiwebhusayithi yakho. I-Chili Piper inceda njani amaQela okuThengisa Akusekho ukubhideka kokuhanjiswa kweespredishithi, kungasekho ii-imeyile zangasemva kunye ne-voicemails ukubhukisha intlanganiso, kwaye kungasekho mathuba alahlekileyo ngenxa yokulandela kancinci. Iimpawu zeChili Piper kubandakanya iChili Piper ibonelela ngethemba lakho ngamava angcono okucwangcisela